Waancaa Shaampiyoonsi Liigii: Ogeessi kubbaa miilaa Laawroon abbaa mo'atu tilmaameera - BBC News Afaan Oromoo
Waancaa Shaampiyoonsi Liigii: Ogeessi kubbaa miilaa Laawroon abbaa mo'atu tilmaameera
Ogeessi kubbaa miilaa Maark Laawrosan eenyu waancaa Shaampiyoons Liigii Awurooppaa kana akka mo'ate tilmaameera. Namoonni kubbaa miilaa xiinxlan gara garaas tilmama isaanii kaa'aniiru.
Isinis garee deggertan ta'eef osoo hin taane, qophiifi cimina jiru ilaaluun kilaboota Ingliz lamaan kana keessaa eenyutu mirgaan gala jettanii akka yaaddan tilmaamaa.
Liiverpuulidhamoo Tootinhaamidha? Meeqaafi meeqaan wal mo'atu jettu?
Xiyyaaronni deggertoota kubbaa miilaa samii UK dhiphisaan
Eenyuutu shaampiyoonaa Awurooppaa ta'a?
Liiverpuul injifannoo ajaa'ibaan Shaampiyoonsi Liigiif darbe
Akka Lawroon jedhutti kilaboonni Ingliiz lama waancaa Shaampiyoonsi Liigii Awurooppaatiif walitti kan dhufan inni dhumaa bara 2008 keessa ture. Isaanis Maachester Yunaayitidiifi Chelsiin walitti dhufanii mo'annaa Maanchester Yunaayitidiin xumurame.
Kan baranaa Liiverpuuliifi Tootinhaamiin walitti fide kanaan Liiverpuul yoo mo'ate waancaa ja'affaa fudhata. Tootinhaamiif ammoo waancaa Shaampiyoonsi Liigii Awurooppaa isa jalqabaa ta'a.
Kun Liiverpuuliif baayyee barbaachisaadha akka cimina guddaa agarsiisaa jiraniin.
Ani yeroon kana jedhu looguu gochuuf osoo hin taane waan Liiverpuul cimina addaa agarsiisaa jiruuf qofa jedha Lawroon.
Waancaa bara darbee, Liiverpuul Riyaal Maadiriid kan si'a sadii walitti aansuun mo'ate dorgomee ture. Bara kana ammoo Tootinhaam waliin taphatu. Tootinhaamiin kabaja dhowwachuuf osoo hin taane, tapha kana Liiverpuul mo'achuu qaba jedha ogeessi kubbaa miilaa kun.
Akkuma Liiverpuul warri Tootinhaamis mo'achuudhaaf yaadu sababiin isaas taphattooti hedduu ciccimoo ta'an waan qabaniif akkasumas taphoota hanga waancaaf ga'an keessatti taasisaniinis cimina ajaa'ibaa agarsiisaniiru, jedha.
Haaluma kanaan Laawroon: Tootinhaam 1-Liiverpuul 2 jechuun yoo tilmaamu, namni Jaak jedhamu amma Tootinhaam 3-Liiverpuul 1 qabxii ta'een injifatu jedha. Namni biraan Feeliks jedhamu ammoo tilmaama kan Lawroo waliin walfakkata, Tootinhaam 1-Liiverpuul 2 jechuudha.
Shaampiyoons Liigii: Xiyyaaronni deggertoota kubbaa miilaa samii UK dhiphisaan
Riyaal Maadiriidiifi Liivarpuul: Shaampiyoonaa ta'uuf maaltu murteessa?
25 Caamsa 2018
Liiverpuul 4-0 Baarseloona (4-3): Gareen Jurgen Kilop dirree isaa irratti Baarseloonaa injifate
8 Caamsa 2019